Samsung dia voamarina fa handroso miaraka amin'ny Note 8, haseho amin'ny volana septambra | Vaovao momba ny gadget
Betsaka ny tsaho niely nanodidina ny tandavan'i Note nandritra ireo volana ireo, taorian'ny nanerena ny orinasa Koreana hanala azy io teny an-tsena noho ny fipoahana vokatry ny fitaovana kely, fa ny tsara indrindra nataon'izy ireo dia ny fanasitranana ara-pahasalamana. esory amin'ny fivezivezena izy, ao anatin'izany ny fitaovana rehetra izay nozaraina nanerana an'izao tontolo izao. Misy ny tsaho milaza fa afaka mijanona tsy mamokatra ireo elanelam-potoana ireo ny orinasa ary mampiditra azy ao amin'ny S8, ilay sainam-bolan'ny orinasa. Raha ny marina, andro vitsivitsy lasa izay dia nolazaiko taminao fa ny S8 dia mety hifanaraka amin'ny stilosy, ny stilazy izay hamidy tsy miankina amin'ilay fitaovana.
Saingy lavitra ny famoahana avo lenta miaraka amina stylus tokana eny an-tsena, dia tokony hotadidina fa tsy misy fantsona toa ny Note eny an-tsena, ny orinasa Koreana dia manohy miloka amin'ity fitaovana ity, ary araka ny filazan'ny Business Korea , ny orinasa dia manolotra ny fahavalo fahavalo ho an'ny Note amin'ny volana septambra amin'ity taona ity, mamela fotoana mety eo anelanelan'ny fampisehoana ny S8 sy ny fivarotana azy.
Amin'izao fotoana izao ary satria mbola misy fotoana lava be hanombohana azy, ny zavatra tokana azontsika vinavinaina dia ny fanamafisan'ny orinasan-tsana koreana ireo zava-baovao tafiditra ao amin'ny Note 7, toa ny scanner iris, ankoatry ny fanampiana asa vaovao mankany amin'ny stilosy an'ny fitaovana. Ho fanampin'izany, hamoaka mpanampy nomerika vaovao koa avy amin'ny laboratoara ao amin'ny Viv Labs, orinasa iray azon'ny orinasa Koreana volana vitsy lasa izay ary io ihany no noforonin'i Siri tamin'izany fotoana izany. Ny lafo dia ny fandraisan'ny mpampiasa maro an'ity zaridaina fahavalo amin'ny Note ity amin'ny tànana misokatra, aorian'ny tsiro ratsy ao am-bava navelan'ilay teo alohany. Soa ihany ho an'ny orinasa, ny mpampiasa Samsung dia nanohy matoky ny orinasa na eo aza ity voina ity, indrindra noho ny tsy fisian'ny vaovao manan-danja eny an-tsena, indrindra raha miresaka momba ireo terminal Apple vaovao isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Samsung dia voamarina fa handroso miaraka amin'ny Note 8, haseho amin'ny volana septambra
Nampidirina tao amin'ny CES any Las Vegas ny Honor 6X vaovao